MM – 4us7.com – 4Us! – For Us!
🤔 ပျော်ရွှင်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ ကျန်းမာမှု- ၁။ အတွင်းစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှု။ 2. အခြားသူများကို ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်းမှ ကျေနပ်မှုရရှိခြင်း။ ဆက်ဆံရေး။ 12R.tv❌✅ သည် လာမည့်နှစ်အကုန်တွင်၊ “2022 သည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အကောင်းဆုံးနှစ်ဖြစ်သည် 🙂👍” ဟုကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီတိုင်းပြောနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်။ Marcin Ellwart
လူသား (Human Being)၊ လူ (Human) – သိပ္ပံအမည်မှာ “Homo Sapiens” ဖြစ်ပြီး မြန်မာလို အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့် “ဉာဏ်ပညာရှိသူ၊ သိတတ်နားလည်သူ” – သည် ဟိုမိုနီဒယ် (Hominidae) မိသားစု မျိုးနွယ်ဝင် ဘိုင်ပေဒယ် ပရိုင်းမိတ် (Bipedal Primates – ခြေနှစ်ချောင်းနှင့် လမ်းလျှောက်သူ) များဖြစ်သည်။ မိုက်တိုကွန်ဒရီရယ်ဒီအန်အေနှင့် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများမှ တွေ့ရှိချက်အရ ခေတ်သစ် လူသား (Moden human) သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀,၀၀၀ ခန့်က အာဖရိက မှ ဆင်းသက်လာသည်။ လူတွင် အလွန် အဆင့်မြင့်သော ဦးနှောက် ပါသဖြင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ချင့်ချိန်နိုင်စွမ်း၊ စကားပြောနိုင်စွမ်း၊ ပြန်လည် သုံးသပ်နိုင်စွမ်း (introspection)၊ ပြဿနာ ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းနှင့် စိတ်ခံစားနိုင်စွမ်း (emotion) ရှိသည်။ ဤသို့သော စိတ်စွမ်းအားများနှင့် မတ်မတ်ရပ်နိုင်သော ကိုယ်ခန္ဓာများက ရှေ့လက်အား စိတ်လိုလက်ကျ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အသုံးပြုစေနိုင်ပြီး အခြားမျိုးစိတ် (species) များထက် ကိရိယာများကို တီထွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ လူသည် ကမ္ဘာ့ နေရာ အနှံ့အပြားတွင် နေထိုင်ကျက်စားလျက်ရှိပြီး ကမ္ဘာ ပေါ်တွင် အန္တာတိက မှအပ အခြားတိုက်ကြီးများတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၂၀ဝ၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ထုတ်ပြန်သည့် စာရင်းအရ ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူဦးရေ ၆.၇ ဘီလျံခန့် ရှိသည်။ ၎င်းသည် ထိုမျိုးစိတ်တွင် Homo sapiens sapiens ဟု တစ်ခုတည်းသော မျိုးစိတ်ကွဲ (subspecies) သာ မပျောက်ကွယ်ပဲ ကျန်ရှိသည်။
မတ်စ်လိုးမှ အဲလဘတ် အိုင်းစတိုင်း၊ ဂျိမ်းစ်အက်ဒမ်၊ အီလိန်နာ ရုစဗဲ့၊ ဖရက်ဒရစ် ဒေါက်ဂလပ် အစရှိသော ကျော်ကြားသည့် လူများကို လေ့လာခဲ့ပြီး ထိုလူများကို လေ့လာမည့် အစား စိတ်မနှံ့သည့် လူများကို လေ့လာပါက “ထိုသို့ မရင့်ကျက် မကောင်းသည့် မကျန်းမာသည့် လူများကို ဥပမာ အနေနှင့် လေ့လာပါက မကောင်းသည့် စိတ်ပညာ နှင့် မကောင်းသည့် ဒဿနိကဗေဒတို့သာ ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ မတ်စ်လိုးသည် ကောလိပ်ကျောင်းသား များထဲမှ အကျန်းမာဆုံး ကျောင်းသား ၁ ရာခိုင်နှုန်းကို ရွေးထုတ် လေ့လာခဲ့သည်။
မတ်စ်လိုးသည် သူ၏ သီအိုရီကို ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသော စာအုပ်ဖြစ်သည့် “စိတ်ဆောင်မှု နှင့် စရိုက်သဏ္ဌာန်” (Motivation and Personality) စာအုပ်တွင် အပြည့်အစုံ ဖော်ပြခဲ့သည်။
အခြေခံ အကျဆုံးသော အောက်ဆုံး အဆင့် ၄ ဆင့် တွင် မတ်စ်လိုး၏ အဆိုအရ “ချို့တဲ့မှု ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ” (Deficiency Need သို့ D-Need) ပါဝင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ၎င်းတို့တွင် ဂုဏ်သိက္ခာ၊ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်း နှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ လုံခြုံမှု နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ ပါဝင်သည်။ အခြေခံ အကျဆုံးသော ဇီဝကမ္မ ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ မှ လွဲ၍ အခြားသော ချို့တဲ့မှု ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ မပြည့်စုံပါက လူ၏ ခန္ဓာကိုယ်မှ မည်သို့မှ ထူးခြားမှု မပြသော်လည်း ထိုသို့ မပြည့်စုံမှု အတွက် စိတ်သောက ရောက်မှု၊ စိတ်အတွင်း၌ တင်းမာမှုတို့ ဖြစ်နေမည် ဟု ဆိုသည်။ မတ်စ်လိုး၏ သီအိုရီမှ ဆွေးနွေးပြထားသည်မှာ အခြေခံ အကျဆုံးသော လိုအပ်ချက်များ ပြည့်စုံမှသာလျှင် လူတစ်ယောက် အနေနှင့် အခြားသော လိုအပ်ချက်များကို ရရှိရန် အတွက် ပြင်းထန်သော ဆန္ဒဖြင့် ကြိုးစားလိုစိတ် ရှိမည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ မတ်စ်လိုးမှ မက်တာမိုတီဗေးရှင်း (Metamotivation ) ဟူသော အသုံးအနှုန်းတစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့ပြီး အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ ပြည့်စုံသော လူများသာလျှင် အစဉ်တစိုက် ကောင်းသထက်ကောင်းအောင် ကြိုးစားလေ့ ရှိသည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ မက်တာ မိုတီဗေးရှင်း ရှိသော သူများကို လူဖြစ်ရကျိုးနပ်အောင် လိုအပ်ချက် (Being Need သို B-Need) ဟု ခေါ်လေ့ ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရုံးသုံးဘာသာစကား။မြန်မာဘာသာစကားသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရုံးသုံး ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ဗမာလူမျိုးနှင့် ဗမာနွယ်ဝင်(ဓနု၊ အင်းသား၊ တောင်ရိုးနှင့် ယော)တို့၏ ဇာတိစကားဖြစ်သည်။ ဗမာလူမျိုးတို့သည် တိဘက်-ဗမာနွယ် ဘာသာစကားများ (Tibeto-Burman Languages) ပြောဆိုသည့် လူမျိုးနွယ်စုကြီးမှ အကြီးဆုံးသော လူမျိုးဖြစ်သည်။ လူဦးရေ ၃၆သန်းခန့်သည် မြန်မာဘာသာစကားကို မိခင်ဘာသာစကား အနေဖြင့် သုံး၍ မြန်မာတိုင်းရင်သားများသည် ဒုတိယဘာသာစကား အနေဖြင့် သုံးသည်။မြန်မာဘာသာစကားသည် တိဘက်-ဗမာနွယ် ဘာသာစကားများ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သည်။ တိဘက်-ဗမာနွယ် ဘာသာစကားများ အုပ်စုသည် တရုတ်-တိဗက်နွယ် ဘာသာစကားများ မိသားစု (Sino-Tibetan Languages Family) ထဲတွင် ပါသည်။ မြန်မာဘာသာသည် တက်ကျသံရှိသော (tonal) ၊ နိမ့်မြင့်အမှတ်အသားရှိ (pitch-register) ဖြစ်သော၊ ဧကဝဏ္ဏစကားလုံး (monosyllabic) အလွန်များသော ဘာသာစကား ဖြစ်သည်။ ကတ္တား-ကံ-တြိယာ စကားလုံးအစီအစဉ်ဖြင့် ရေးသော သရုပ်ခွဲဘာသာစကား (analytic language) လည်းဖြစ်သည်။ မြန်မာအက္ခရာများသည် ဗြာဟ္မီအက္ခရာ သို့မဟုတ် ဗြာဟ္မီအက္ခရာမှ ဆက်ခံထားသော မွန်အက္ခရာတို့မှ ဆင်းသက်လာသည်။